Serivisy - Mestech Industrial Limited
Amin'ny maha orinasa orinasa mpamokatra matihanina azy, ny MESTECH dia tsy vitan'ny hoe manome vokatra fa manome vahaolana sy serivisy teknika manerantany ihany koa. Ireo serivisy ireo dia misy ny vokatra plastika, ny famolavolana ny vokatra ary ny famokarana, ny fanamboarana ny ampahany, ny fanodinana aorian'ny famolavolana, ny famolavolana ny vokatra ary ny fivoriambe, ny fanambaràna momba ny fadin-tseranana sy ny lafiny hafa.
Fanamboarana bobongolo sy tsindrona koronosy
MESTECH dia manana rafitra famokarana lasitra plastika tanteraka. Maherin'ny 300 ny lasitra plastika vita amin'ny herintaona, ary ny famolavolana ny tsindrona sy ny fanodinana ireo vokatra plastika dia natao. Ny fenitry ny bobongolo dia HASCO, DEM, MISUMI ary CHINA. Ankoatry ny fihaonana amin'ny mpanjifa amin'ity faritra ity dia aondrana any Eropa, Amerika Avaratra sy Azia ary firenena sy faritra hafa koa ny lasitra ataonay.
(Hamaky bebe kokoa)
Fanodinana faritra vita amin'ny vy
Ny metaly mafy orina dia manana teboka miempo kokoa, hamafin'ny tanjaka sy tanjaka, fitondra-tena, fahamendrehana ary famirapiratanana metaly noho ny fitaovana hafa. Amin'ny alàlan'ny fanitsiana ny firafitra anatiny sy ny firafitry ny metaly molekiola, dia afaka mahazo fananana ambony lavitra noho ny an'ny plastika sy ny metaly hafa isika
Firaka metaly tsara sy faritra azo antoka tsara azo raisina. Noho izany, ny faritra vy dia be mpampiasa amin'ny milina sy fitaovana, indostrian'ny simika, fiaramanidina, aerospace, fitetezana, fitaterana, jiro, fitsaboana ary elektrika.
Ny metaly ampiasaina matetika dia vy, firaka aliminioma, firaka zinc, varahina, firaka varahina ary firaka titanium. Ny fomba fanodinana ireo ampahany vita amin'izy ireo dia tsy mitovy noho ny firafitra sy ny firafitra ary ny fampiasana azy ireo. Ankoatry ny fandrendrehana vy, ny teknolojia fanodinana lehibe ampiasaintsika hahazoana ny habe sy ny endrik'ireo metaly farany dia ny: fanariana maty, fanodinana vovoka ary ny masinina.
Ny vokatra tonga lafatra dia azo antoka fa avy amina endrika tsara indrindra.
Miaraka amin'ny fivoaran'ny teknolojia Internet sy ny fisian'ny teknolojia vokatra vaovao, ny fanavaozana ny vokatra vaovao eo amin'ny tsena ankehitriny dia haingana sy haingana kokoa. Ny fomba hamelana ny vokatrao hiditra amin'ny tsena amin'ny fotoana fohy indrindra no lakilen'ny fifaninanana orinasa. Orinasa maro mazàna no manankina ny loharanon-karena ivelany hamita ny sasany na ny ankamaroan'ny sanganasa famolavolana vokatra, mba hanafohezana ny tsingerin'ny fampandrosoana ny vokatra, ary hifantoka amin'ny fiasan'ny tsena sy ny zavatra ifotony.
Ireo injenieran'ny Mestech dia afaka manome faritra plastika, faritra misy fitaovana ary famolavolana firafitry ny vokatra, famakafakana azo atao, ary koa fanamboarana bobongolo fanarahana, famokarana faritra ary serivisy fivoriambe vita vita arakaraka ny fepetra takian'ny mpanjifa.
Vokatra vaovao hatrany am-piandohan'ny famolavolana ka hatramin'ny famokarana sy marketing, matetika dia mila mampiasa vola, angovo ary fotoana be dia be. Ny kalitaon'ny famolavolana vokatra dia mamaritra mivantana ny fahombiazan'ny vokatra. Prototype dia fitaovana iray lehibe hijerena ny famolavolana vokatra. Izy io dia ampiasaina hanamarinana ireo olana misy amin'ny famolavolana vokatra, hanatsarana ny famolavolana ary hisorohana ny lesoka lehibe izay miteraka fatiantoka lehibe amin'ny dingana manaraka. Ohatra, ho an'ny fiara, fiaramanidina, sambo ary vokatra elektronika sy herinaratra, ny prototypes dia namboarina hatrany hanamarinana alohan'ny famokarana bobongolo sy ny faritra.
Mestech dia afaka manome ny mpanjifa CNC, fanontana 3D amin'ny faritra plastika sy faritra vy ary koa famokarana maodely vita amin'ny SLA, ary koa famokarana santionany kely.
Misy vokatra an'arivony eny an-tsena, izay havaozina isan'andro isan'andro. Mihombo ny fifaninanana eo amin'ny tsena. Miovaova ny haben'ny orinasa. Orinasa maro, voafetra amin'ny sehatry ny orinasany manokana, mifantoka amin'ny famolavolana sy ny fampandrosoana ny tsena na ny vokatra teknolojia vaovao izy ireo, ary tsy manangana orinasa mpamokatra vokatra.
Afaka manome fanangonana vokatra sy fanohanana teknika ho an'ny mpanjifa toy izany izahay. Izy io dia misy andiana serivisy mijanona tokana toa ny famolavolana vokatra, ny famokarana ampahany, ny fividianana ary ny fanangonana.
Mba hanomezana tolotra sy vokatra avo lenta amin'ny famolavolana plastika, ny famonoana vy sy ny fanodinana vy dia iray amin'ireo tanjon'ny MESTECH. Miaraka amin'ny fitaovantsika sy ny kojakoja tsara ananantsika dia manana ekipa injeniera za-draharaha sy mpiasa mahay koa izahay. Manome toky ny kalitaon'ny vokatra sy serivisinay izahay amin'ny alàlan'ny fanatsarana hatrany ny teknolojia sy teknika mandroso, ary koa ny fandaminana sy ny fitantanana henjana.
Ny famokarana vokatra dia misy andian-gadona mifandraika hatrany. Mba hahafahana mamaly ny filan'ny mpanjifa dia manome serivisy turnkey izahay manomboka amin'ny famolavolana, fampandrosoana, fanamboarana hatramin'ny fivorian'ny vokatra. Afaka mahita bebe kokoa momba ny tsirairay etsy ambany ianao na amin'ny fomba hafa, mifandraisa aminay mba hiresaka momba ny zavatra takinao.